Maguta: Skylines yatove nemusi weMass Transit kuwedzera | Linux Vakapindwa muropa
Maguta: Skylines yatove nemusi wekuwedzera kweMass Transit
Mune ino blog isu takatozivisa nhau nezve kuvhurwa kwedhorobha manejimendi uye simulation vhidhiyo mutambo Maguta: Skylines yeLinux, hazvo, sezvo iyi nhau nguva yakareba yadarika kusvika pakutanga kwekuwedzera kwekuwedzera kwemutambo wevhidhiyo, uye ikozvino tinoziva zita racho, Mass Transit, uye izvo zvichaburitswa zvese zviri zviviri Windows uye Mac, pamwe neLinux. Naizvozvo, imwe nhau yakanaka kubva kune yemitambo nyika yepenguin chikuva.
Ichave iripo muna Chivabvu 18, ndiko kuti, munenge mwedzi uye mutengo unenge uri nezve € 12.99 yekuwedzera kugona kwe Cities: Skylines. Pakati pezvimwe zvinyorwa, unogona kuzviwana mune rinozivikanwa Valve online chitoro, Steam. Ehezve, uku kuwedzera kutsva kunouya pamwe nekumwe kugadzirisa maererano nemutambo wemitambo uye mashandiro matsva anowanikwa kune vashandisi vemutambo wevhidhiyo.
Vese vateveri verudzi urwu rweguta rekuvaka uye manejimendi mutambo wevhidhiyo vari muhombe neiyi nhau dzinogamuchirwa. Saka isu tichamirira mazuva asara ekuvhurwa uye tichaona kuti kuvhurwa kutsva uku kwakatichengetera patinokwanisa kuzviedza mune yedu GNU / Linux distros. Zvakanaka, maererano neshanduko dzakabatanidzwa muMass Transit ndedzinotevera dzatinonyora pazasi:
Dzimwe shanduko maererano ne kutakura senge maforiya, maairship, tambo mota, monorails, nezvimwe.
Zviitiko zvitsva kugadzirisa traffic uye kugadzirisa mune yekufambisa system kuunza nyowani matambudziko mukugadzirisa kwavo.
Uye zvakare zvimwe zvitsva ngowani dziripo kwaChirper uye kupedzisa kuwedzera kwatakataura nezvako.
Rangarira zvakare kuti mutambo Maguta: Skylines unogona kuitenga ne € 27.99, uye ini handizive kana paine paine chero zvakakosha zvinopihwa painotanga pane Steam ...
Saka munguva pfupi iwe uchakwanisa kunakidzwa nekuwedzera kweMass Transit uye isu tichava nazvo mamwe mashoko kuwedzera nhau munguva pfupi. Kuti uwane rumwe ruzivo, unogona kubvunza iyo Paradox yepamutemo webhusaiti, kwaunogona kunyange kuona vhidhiyo nezve tirera yekuwedzera uku.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Maguta: Skylines yatove nemusi wekuwedzera kweMass Transit
Fatdog64: Imwe Yakareruka Linux Distribution Unofanira Kuedza
Windows chengetedzo yakatonyanya mubvunzo